Samsung Galaxy Note 7 bịarutere China na-enweghị akara ọ bụla nke nsụgharị 6GB / 128GB | Akụkọ akụrụngwa
El Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. na-aga n'ihu na-eme ka ọ pụta ìhè na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke mba, na n'oge awa gara aga ọ bịarutere na eze na China, maka oge na otu ụdị nke ahụ bụ otu ihe a pụrụ ịzụta na mba ụwa. Versiondị a na-enye anyị 4GB RAM na 64GB nchekwa dị n'ime nwere ike ịgbasa dịka anyị maraworị site na kaadị microSD.
Otú ọ dị, ụlọ ọrụ South Korea kwadoro nke ahụ Versionsdị abụọ nke ngwaọrụ ọhụrụ ahụ ga-adị na China, yana 6GB nke RAM na 128GB nke nchekwa dị n'ime, nke ugbu a enweghi akara ọ bụla n'ahịa ndị China.
N'oge a naanị ozi anyị maara bụ na ụdị "nkịtị" enwere ike ịchekwa site na Septemba na-esote ma nwee ọnụ ahịa nke yuan 1, nke bụ ihe dị ka euro 5.988, mana tupu ụtụ isi. Versiondị ya na 6GB RAM na 128GB nke nchekwa dị n'ime, n'oge a enweghị ọnụ ahịa, ọ nweghịkwa ụbọchị maka mbata ya na ahịa.,, ọ bụ ezie na ọnụahịa ya ga-akarị 1.000 euro fọrọ nke nta n'ezie.
Ọtụtụ ndị ọrụ anabatala ụdị nke a nke Galaxy Note 7 nke Galaxy Note XNUMX, ndị ka na-achọ ike na nchekwa, mana ugbu a, anyị ga-echere ya. N'ezie, cheta na na mbụ ọ ga-adị na China, ọ bụ ezie na a naghị achịkwa ya na Europe na ọtụtụ mba ndị ọzọ gburugburu ụwa.
You chere na 6GB RAM na 128GB mbipute nchekwa dị n'ime Galaxy Note 7 bara uru ichere?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Samsung Galaxy Note 7 rutere China na-enweghị akara ọ bụla nke nsụgharị 6GB / 128GB
Isiokwu na-akpali mmasị, Achọrọ m ịdenye aha na ibe ahụ
Zaghachi Jose gordillo